Wednesday July 31, 2019 - 21:12:10 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshadu ku xiriirto lagu daabacay warar been abuur ah oo lagu sheegayay in duqaymo dhowr ah ay ka dheceen koonfurta Soomaaliya laguna beegsaday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Haarun Macruuf waa Wariye katirsan VOA
Wararkan oo gaaraya ilaa afar war oo kala duwan ayaa saddexda todobaad ee lasoo dhaafay waxaa siyaabo iyo wakhtiyo kala duwan soo daabacay wariye katirsan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Codka Maraykanka (VOA) kaas oo sheegay in xogo uu helay ay sheegayaan in duqaymahaas ay ka dheceen dhulka ay Al-Shabaab Maamulaan.
Haaruun Macruuf oo ka mid ah wariyayaasha Soomaalida ee sida aadka ah wax uga qora Al-Shabaab ayaa barta uu kuleeyahay Twitter-ka ku soo qoray in duqaymahaas lala beegsaday Al-Shabaab, isagoo dhanka kale magacaabay saraakiil iyo ciidamo uu ku tilmaamay in weeraradaas cirka ah lagu beegsaday, qaarkoodna laguba dilay.
Duqaynta ugu horeysa ayuu wariyuhu sheegay inay dhacday 12kii bishan aan ku jirno ee July, isagoo intaas ku daray in duqaynta lala beegsaday saldhiga Xisbada ee magaalada Jilib, halkaasna lagu dilay tobaneeyo ka tirsan ciidamada xisbada iyo taliyahoodii oo uu magaciisa ku sheegay "Xasan Dheere” iyo ku xigeenkiisa iyo sarkaal saddexaad oo uusan magacaabin.
SomaliMeMo oo dabagal ku samaysay xogta wariye Haaruun Macruuf ayaa ogaatay in habayaraatee wax duqayn ah aysan xilligaas iyo xilli u dhow ka dhicin Degmada Jilib, warbixinta wariyhuna ay ahayd been-abuur. Sidoo kale SomaliMeMo waxaa ay ogaatay inaanu jirin shakhsi lagu magacaabo "Xassan Dheere” oo taliye ka ah saldhigga Xisbada Degmada Jilib.
Sidoo kale isla warbixintaas ayuu wariyuhu ku sheegay in la duqeeyay goob qaraxyada lagu barto oo isla magaalada ku taalla, warkaas oo isaguna been ahaa.
Duqaynta kale ee taas xigtay ayaa wariyuhu wuxuu soo qoray taariikhdu markii ay ahayd 19 July, 2019 isagoo tilmaamay inay ka dhacday duleedka magaalada Kuunya-Barroow ee Wilaayada Shabeellada Hoose, laguna dilay sarkaal uu magaciisa ku sheegay ‘Ikhlaas’ iyo laba qofood oo la socotay.
SomaliMeMo ayaa sidoo kale u kuurgashay saxnimada warkaas, waxayna ogaatay inay iyaduna ahayd been abuur kale, isla markaana aysan jirin wax duqayn ah oo habayaraatee deeganadaas ka dhacay waqtigaas, iskaba dhaaf in sarkaal Al-Shabaab la beegsadaye.
Weerarka saddexaad iyo midka afaraad ee iyaguna been abuurka ah ayuu wariye Haaruun Macruuf waxaa uu sheegay inay shalay oo Talaado ah ka kala dheceen degmooyinka Jamaame iyo Bu’aale ee Wilaayada Jubooyinka. Duqaynta Jamaame ayuu sheegay in lagu beegsaday ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab qaybtooda ka hawlgala gudaha Kenya iyo Sarkaal uu sheegay inuu taliye u ahaa ciidamadaas kaas oo uu magaciisa ku sheegay "Ayman”.
Wariye Haaruun ayaa sheegay in duqaynta xilliga ay dhacaysay ay ciidamada iyo taliyohoodu ku jireen xaflad qalin jebin ah oo loo qabanayay rag cusub oo ciidamadaas ku soo biiray. Duqaynta Bu’aale ayuu ku sheegay in lala beegsaday sarkaal sare oo Al-Shabaab ka tirsan, inkasta oo uu badbaaday sarkaalkaas sida uu hadalka u dhigay.
SomaliMeMo waxay sidoo kale dabagal ku sameysay xaqiiqda wararkaas, waxayna ogaatay in labadaas duqaymood ee uu wariye Haaruun sheegay ay been abuur ahaayeen, isla markaana aysan jirin habayaraatee wax duqaymo ah oo ka dhacay Jamaame iyo Bu’aale intaba.
Duqaymahaan uu sida isdabajoogga wariyuhu usoo tabiyay intii u dhaxaysay 12ka July ilaa 30ka July ayaa dhamaantood marka laga soo tago inay been-abuur qayaxan ahaayeen, hadana waxaa kale oo ay wadaageen in aysan jirin cid sheegatay inay deeganadaas duqaymo ka gaysteen inkastoo wariyuhu uu sheegayay inuu ogaaday xittaa cidda lala beegsaday iyo waxa ay qabanayeen xilliga la duqaynayay, arintaas oo shaki gelinaysa sababta ka dambaysa in beenta intaas la eg uu sheego wariye sheegta inuu xog-ogaal u yahay dhacdooyinka Soomaaliya isla markaana dhexdhexaad ka yahay dhinacyada dagaalku u dhexeeyo.
Arinta kale ee shakiga abuuri karta ayaa ah sababta ay Idaacada uu ka shaqeeyo ee VOA ay wararkaas uu wariyohoodu ku daabacayo bartiisa Twitter-ka usoo qaadan waysay, iyadoo la ogyahay in Idaacadu ay inta badan aad uga hadasho weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo kuwa ay gaystaan intaba.
Duqayntii ugu dambaysay ee ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa ahayd middii Maraykanku ka gaysteen duleedka Magaalada Kuunya Barroow taariikhdu markii ay ahayd 25 Juun 2019, wixii xilligaas ka dambeeyayna ma jirin wax duqayn ah oo dhacday ama xitaa uu Mareykanku ka sheegtay koonfurta Soomaaliya.
Balse mudadaas bil iyo dhowrka maamlmood ah ee ka soo wareegtay duqayntaas ugu dambaysay ayuu wariyuhu wuxuu soo tabiyay in ay dheceen duqaymo kala duwan oo ka kala dhacay Jilib, Jamaame, Bu’aale iyo Kuunya Baroow, kuwaas oo dhamaantood been abuur ah.
Dhaqanka ah in lasoo tabiyo weeraro iyo duqaymo aanan jirin laguna andacoodo in Al-Shabaab lagu laayay ayaa waxaa caan ku ahaa warbaahinta ku hadasha afka Dowlada Federaalka iyo kuwa taageerayaasha u ah, kuwaas oo marar badan soo daabici jiray warar been abuur ah oo arimahaas quseeya.
Warbaahinta DF ayaa iyadu magac xumo iyo kalsooni la’aan bulshada uga kasbatay wararka noocaas oo kale ah, waxaana hadda muuqata in wariye Haaruun Macruuf uu isaguna dhankiisa dhiiqada ka soo galay. Mana cadda in qorshahaan cusub ee uu bilaabay uu yahay arin isaga u gaar ah iyo in ay jiraan xubno katirsan dowladaha dagaalka kula jira Al-Shabaab oo wariyaha xogo qaldan soo siinaya si ay danahooda borobagaandada dagaalka ah ugu gaaraan.
Cudurka Carona oo ka dilaacay qaar kamid ah wadamada Khaliijka [Warbixin].
Farmaajo muxuu dalka kusoo kordhiyay Sedaxda sanadood ee uu xilka hayo [Warbixin].
Cudurka Carona oo saameyn xun ku reebay dhaqaalaha dalka Shiinaha [Warbixin].